HALKAAN KA AKHRISO WARARKA WARGEYSKA M. TIMES EE MAANTA OO AH ARBACO 19-KA JAN. 2022-KA
Wednesday January 19, 2022 - 09:31:28 in Wararka by Mogadishu Times
Waxaa Dalka Turkiga la gaarsiiyay dhaaw ac Afhayeenka Xukuumadda Federaalka So omaaliya maxamed Ibraahim Macalimuu, oo dhaawac uu kasoo gaaray Qarax maalmo ka hor ka dhacay Muqdisho, kaasi oo lala beegsa day gaari uu saarnaa.
Dhaawac Maxamed ibrahim Macalimu ay aa la geeyay Isbitaalka Sehir Ee Basaksahir Ee Magalada Istanbul,halkaasi oo dhaqaatiirtu ay kula tacaalayaan xaaladda caafimaad ee Afhayeenka.
Dhaqatiirta ayaa sheegay in xaaladiisa ay tahay mid aad u wanagsan mudo koobana uu Hospitalka Ku jiri doono,iyadoo sidoo akle ay jiraan dadaallo dheeraad ah oo ay sameynay aan Dhaqaatiirtu.
Cusbitaalka waxaa ku booqday Mas’uuliyiin ka mid ah safaaradda Soomaaliya ee dalka Tu rkiga, kuwaasi oo qayb ka ahaa soodhweynta iyo dadaalada dalkaasi lagu geeyay.
Sidoo kale waxaa Isbitaalka ku booqday qaar ka mid suxufiyiinta ku nool dalkaasi, kuw aasi oo sheegay in xaaladdiisu ay tahay mid wanaagsan.
Macalimuu ayaa ku dhaawacmay Qarax xo oggan oo lala beegsaday gaarigiisa, kadib mar kuu isku qarxiyay Qof waxyaabaha qarxa isku soo xiray, waxaana xusid mudan in uu horay uga bad baaday ilaa iyo afar qarax oo siyabo
SACIID DENI oo sheegay arrin uu caqa bad iyo DAGAAL kala kulmay
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullahi Deni oo khudbad ka jeediyey shirka dhalinyar ada oo todobaadkaan ka furmay Garowe ayaa soo bandhigay caqabadaha ku gedaaman jiri taanka dowladnimada Soomaaliya.
Madaxweyne Deni ayaa sheegay in maa mulkiisu uu xoogga saaray sidii dhalinyarada fursad loo siin lahaa, balse dagaal culus oo siy aasadeed ay kala kulmeen.
"Dowladaan waxay diyaar u tahay in furs ado badan ay u abuurto dhalinyarada, waase nalagu colaadinayaa, aad ayaan uga xumahay wax lasoo dhaafay in dib la iigu celiyo, dhal iny arada waxaan leeyahay midnimada uma dda Soomaaliyeed iyo nabad da xooga saara,” ayuu yiri Ma daxweyne Deni.
Sidoo kale Saciid Deni oo hadalkiisa sii watay ayaa yiri, "Caqabada ugu weyn ee ka masuul ahaan aan dareemaayo waxay tahay, dadkeena waxaa ku badatay in qof kasta uu xooga saaro dantii sa gaarka ah, waa jiraan waxyaabo naga soo gaaray burburkii oo aan ka soo kabanay, laaki in wax badan oo cusub ayaa nagu soo biiraya, qatar ayaa ku soo wajahan Soomaaliya, ma jirto cid dan guud ka fikireysa.”
Saciid Deni ayaa shirkaan ku tilmaamay mid muhiim u ah dowlad-dhiska Soomaaliya, isagoo dhalinyarada ka soo qeyb gashay kula dardaarmay in baahida ay qabaan dadka Soo maaliyeed ee dhanka ammaanka ah ay isku dayaan inay wax ka qabtaan.
"Shirkaan waa mustaqbalkii Puntland iyo guud ahaan Somaliya, sababtoo ah dadkeenu waa wada dhalinyaro, go’aanka aad Shalay gaartaan ayaa dalkaan iyo dadkaan mustaqbal u noqon doona,” ayuu yiri Madaxweynaha Pun tland Saciid Deni.
Ugu dambeyntii Madaxweyne Dani ayaa dhalinyarada kula dardaarmay in shirkooda ay ka soo saaraan go’aano wax ka bedeli kara marxaladda ay ku sugan yihiin dadka Sooma aliyeed, isagoo soo hadal qaaday dhinacyada Isku dhaca beelaha, tiknoolajiyadda iyo caqa bado kale oo ay Soomaalidu wajaheyso.
Xuutiyiinta Dalka Yemen Oo Lagu Eedeey ay In Ay Ka Dambeeyeen Weerar Ka Dhacay Dubai
Dowladda Imaaraatka Carabta ayaa ku eedeeysay kooxda Xuutiyiinta Yemen in ay fuli yeen weerar saddex qof ay ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Dubia.
Sargaal lagu magacaabo Anwar Gargash oo u hadlay xukuumadda Imaaraadka ayaa ku tilmaamay weerarka fal aad u fool xun.
Saddex Booyad oo ah oo kuwa shidaalka qaa da ah ayaa qarxay, waxaana ku dhintay sad dex qof, waxaana dab uu ka kacay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Dubia Isniintii,
Dowladda Imaaraatka Carabta ayaa sheeg tay inay "xaq u leeyihiin in ay ka jawaabaan weerarka ay ” Xuutiyiinta ku soo qaadeen ma gaalada Dubia.
Bayaanka ka soo baxay dowladda Imaar aadka ayaa lagu yiri : "Weerarka ma ahaan do ono mid aysan ka dhalan ciqaab.”
Sarkaal ka tirsan Imaaraatka ayaa ku tilm aamay weeraradii Isniintii lala beegsaday du bia inay ahaayeen "gardarrada ay ku kaceen Xuutiyiinta,” sida ay wakaaladda wararka ee Reuters ka soo xigatay.
Guddiga qaban qaabada doorashada Gudd oomiyaha Guddiga Xalinta khilaa faadka oo la Magacaabay
Guddiga Xallinta Khilaafaadka Doorasho oyinka Heer Federaal ayaa magacaabay gu ddiga qaban qaabada doorashada guddoom iyaha Guddigaas.
Guddiga la magacaabay oo ka kooban 5 Xubnood ayaa laga soo xulay guddiga dhexd iisa, waxaana ay ka Shaqeyn doon aan qaba shada doorashada guddoomiya ha Gudsiga xalinta khilaafaadka doorasho oyinka.
Guddiga xalinta khilaafaadka Heer Fede raal ayaa ugu baaqay Guddiga la Magaca abay in ay si wanaagsan u gutaan waaji baadkooda Shaqo.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaars iinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa 18-kii Bi shii Decembar ee sanadkii la soo dhaa fay ee 2021 waxaa uu Shaqada k Eryay 7 Xubnood oo uu kujiray guddoom iyaha Gudsiga xalinta khilaafaadka, isaga oo ku eedeeyay inay lumiyeen madax ban aanidii guddiga, isla mar kaana ay baal mareen Xeerka anshaxa doora shada.
Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye Oo Si Weyn Loogu Soo Dhaweeyay Magaalada Jowhar
Wasiirka Gargaarka xukuumada Federalka Soomaaliya Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa gaartay magaalada Jowhar xarunta dowl ad goboleedka Hirshabeelle. Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye iyo xubni hii la socday ayaa waxaa si weyn ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Maxamed Dheere ee magaalada Jowhar Wasiiro iyo xidh ibaano ka tirsan dowl ad goboleedka Hirshab elle iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Wasiirka Gargaarka Khadiijo Maxamed Diir iye oo ka mid ah xildhibanaada baarlamaanka ayaa deegaan doorashadeeda waxa uu tahay magaalada Jowhar iyadoo kursiga ay ku fadhi dana uu ka mid yahay kuraasta dhawaan gudd iga doorashada Hirshabelle ay ku dhawaaq een kuwaasoo lagu dooranayo magaalada Jowhar.
Khadiijo Maxamed Diiriye oo la hadashay saxaafada marka ay soo degtey ayay sheegtay inay u timid magaalada Jowhar ka qeybqaadashada doorashada Golaha Shacabka.
"Waxaan ku faraxsanahay in deegaan aan aqaan oo aan ku dhashay,waalidkey ku dh asheen carruurteydana ku dhalatay aan soo gaaro waan u mahadcelinayaa dadka isoo dha weeyay.”ayay tiri Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye.
Waxaa lagu wadaa in dhawaan lagu qabto doorashada ilaa 11 kursi oo ka tirsan Golaha Shacabka.
Mahdi Guuleed & Wakiilka QM oo ka wada hadlay hirgelinta doorashooyinka
Ra’iisul wasaare kuxigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa Shalay M/Muqdisho kula kulmay Wakiilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Amb, Jemis Swan.
2da mas’uul ayaa ka wa da hadlay muhiimad da ay leedahay in dalka la ga hirgeliyo doorasho waqtigeeda ku dhacda iyo in la taageero xilliga doorashada Soomaaliya ee socota.
Wakiilka Xoghayaha Guud ee Q/Midoobay ee Soomaaliya Amb, Jemis Swan ayaa uga mahad celiyay Xukuumadda Soomaaliya sida ay uga go’an tahay dardar gelinta Arrimaha do orashooyinka.
Q/Midoobay ayaa waxaa ay kamid tahay Hay’adaha taageera doorashada Soomaaliya, iyaga oo bixiya qeyb ka mid ah dhaqaalaha ku baxaya doorashada.
Safiirka Sacuudiga ee Somalia oo wara aqaha aqoonsi laga guddoomay
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah, Md. Cabdisaciid Muuse Cali, ay aa Shalay nuqul ka mid ah warqadaha aqoo nsiga danjirenimo ka guddoomay safiirka cu sub ee Boqortooyada Sucuudigu u soo maga cawday Soomaaliya Mudane Axmed Bin Max amed Almowallad.
Danjiraha cusub ee Dowladda Sucuudiga Axmed Bin Maxamed ay aa Wasiirka Arrimaha Dib adda la wadaagay dadaal ka uu ku bixin doono ad kaynta xiriirka dibl omaa siyadeed iyo wax-wada-qabsiga ka dhex eeya 2da Dowladood iyo Labada shacab ee saaxi ibbada ah, isaga oo ka mahadceliyey soo dho weynta diirran ee loo sameeyey.
Wasiirka iyo Danjiraha ayaa ka wada had lay sidii ay Soomaaliya iyo Sucuudigu u xoojin lahaayeen xiriirkooda soojireenka ah iyo iskaa shiga Labad Dowladood ee dhinacyada amni ga, dhaqaalaha, ganacsiga, arrimaha bulsha da iyo siyaasadda.
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ayaa Danjiraha Cusub ee Boqo rtooyada Sucuudiga ugu hambalyeeyay xilka loo magacaabay, wuxuu na u sheegay in DFS ay ku garab istaageyso gudashada waajibka di blomaasiyadeed ee loo igmaday.
Suxufi caan ah oo isku soo taagay kurs igii la sheegay in la siiyey CC SHAKUUR
Suxufiga rug cadaaga ah ee Xasan Sheekh Axmed Cadde ayaa kusoo biiray masraxa tar tanka doorashada golaha shacabka, isaga oo isku soo taagay kursiga HOP138 ee yaalla M/ Dhuusamareeb ee caasim adda Galmudug.
Xasan Cadde ayaa kurs igan kula loolami doona siy aasiyiin uu ka mid yahay ho ggaamiyaha xisbiga Wadajir, ahna musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Kursiga HOP138 ayaa waxaa hadda ku fadhiya ganacsadaha wayn ee Siciid Nuur Gir iish, ayada oo sanadii 2016 loolankii adkaa ee kursigaas loo galay ay ku baxday lacag dhan hal milyan oo dollar. Si kastaba, Saciid ayaa la sheegay in markan uusan musharax aheyn.
Kursigan oo ka mid ah kuraasta ugu saam aynta badan dhinaca Galmudug, ayaa sanadk ankan ka duwan sanadadii hore, waayo waxaa jirta culeysyo siyaa sadeed oo la doonayo in kursigan aan tartan loo gelin.
Horey waxaa u jiray warar sheegaya in beesha leh kursiga ay siisay siyaasiga Cabdir axmaan Cabdishakuur, uuna qaadanayo tar tan la’aan, hase yeeshee loolanka ka imanaya Xasan Cadde ayaa wax weyn ka beddeli kara xaaladda.
Su’aasha hadda waxay tahay Cabdiraxm aan Cabdishakuur diyaar ma u yahay tartan kan, sababtoo ah haddii looga adkaado waxay saamayn ku yeelan kartaa rajada uu ka qabo kursiga madaxw eynaha Soomaaliya. Wax walba waxay kala caddaan doonaan maalma ha soo socda marka uu guddiga do orashada Galmudug ku dhowaaqo liiska mush araxiinta kursigan.
DF oo la hadashay UK, xilli laga cabsi qabo inay aqoonsato Somaliland
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah, Cabdisaciid Muuse Cali ayaa Shalay khadka telefoonka wada-hadal kula ye eshay Wasiirka arrimaha Afrika ee Boqorto oyada Ingiriiska, Vicky Ford.
2-da Wasiir ayaa ka wada-hadlay xoojinta iskaashiga ku dhisan wax wada qabsiga, ixtiraamka midni mada iyo madax-banaanida Qaran-nimo ee 2da dal, si da lagu sheegay qoraal ka soo ba xay Wasaaradda arrimaha dibadda Somaliya.
Sidoo kale waxay wada-hadalkooda diirad da ku saaree kor u qaadidda xiriirka labo gees oodka ah ee labada dowladood iyo horumarin ta iskaashiga dhinacyada siyaasadda, amniga, dhaqaalaha, horumarinta iyo arrimaha gobolka Geeska Afrika.
Wasiir Cabdisaciid Muuse Cali ayaa dhank iisa uga mahad celiyey dowladda Ingiriiska taa geerada ay u fidiso dowladda Soomaaliya.
Sida ay ogaatay Caasimada Online, wada- hadalkan deg deg ah ee Cabdisaciid iyo Vicky Ford ayaa yimid kadib markii xildhibaano ka tir san Baarlamaanka UK ay markale bilaabeen olole ictiraaf loogu raadinayo Somaliland, oo ayadu ku dooda inay tahay dal madax-ban aan.
Xukuumadda Britain ma aqoonsano gooni isu taagga Somaliland, mana jiro rabitaan ku aadan arrintaas sida ay marar badan sheeg tay,oo ay ugu dambeysay bishii November 2021-kii oo ay Vicky Ford, oo ah wasiirka UK u qaabilsan arrimaha Afrika ay cadeysay in UK ay Somaliland aqoonsan doonto oo keliya mar ka ay go’aan noocaas ah gaaran Soomaaliya iyo dalalka kale ee Afrikaanka ah.
Somaliland ayaa inta badan ku bixisa dhaq aale badan sidii ay uga miro-dhalin laheyd qad iyada gooni isku-taaga, hase yeeshe Sooma aliya ayaa isku deygaas wiiqda, ayada oo ay u gu dambeyso tallaabada Shalay ee ay UK u gaarsiiyeen ilaalinta midnimada iyo madax-ba naanida Soomaaliya.
Xildhibaano, siyaasiyiin iyo ururro tageer ay dooda aqoonsiga Somaliland ee Baar lamaanka Ingiriiska
Xildhibaannada kala ah Stephen Doughty, Tom Tugendhat iyo Zac Goldsmith oo ka tir san Baarlamaanka Ingiriiska, James Carver oo ah siyaasi hore uga tirsanaa Baarlamaanka Yu rub iyo ururka waddamada aan la aqoonsan ee loo soo gaabiyo UNPO, ayaa soo dhaweey ay dooda uu Baarlamaanka Ingiriisku ka yeel anayo aqoonsiga Somaliland. Tom Tugendhat oo ah madaxa Guddida Arr imaha Dibadda ee Baarlamaanka Ingiriiska, ay aa sheegay in uu taageerayo soojeedinta xil dhibaan Gavin Williamson uu ku doonayo in Somaliland la aqoonsado. "Tani waa dood mu hiim ah. Waan taageeri doonaa dooda sooj eedinta Gavin Williamson ee ku aadan in loo hadlo bulsho iyo waddan sannado badan xorn imada u taagnaa" ayuu yidhi Tugendhat.
Xildhinaan Zac Goldsmith iyo Stephen Do ughty ayaa iyaguna aad usoo dhaweeyay, wa xay ku tilmaameen qadiyad muhiim, waxayna sheegeen in ay ka qayb galayaan oo ay suga yaan.
Ururka ay ku midoobeen waddamada aan la aqoonsan ee losoo gaabiyo UNPO, ayaa qo raal ay ku baahiyeen bogooda Twitterka ku bo gaadiyay dooda uu Baarlamaanku Ingiriisku ka yeelanayo aqoonsiga Somaliland, iyagoo xu say sababaha ay Somaliland aqoonsi ugu qal anto.
Dhanaca kale Games Carver oo hore uga tirsanaa Baarlamaanka Yurub, ayaa u sacabo tumay doodan ku saabsan aqoonsiga Somalil and "Shalay Gavin Williamson ayaa hogaamin doona dood ku saabsan qadiyada balaadhan ee aqoonsiga Somaliland, waddankan amaan ka ah ee dagani, wuxuu u qalmaa in fursad la siiyo".
Dowlada Soomaaliya ayaa iyadu aan ku ni yad samayn dhawaaqyadan isla markaana Wa siirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali oo khadka telefoonka kula hadlay Wasiirka Arrimaha Afrika ee Ingiriiska Vicky Ford, ayaa kala hadlay arrimaha midnim ada Somaliland iyo Soomaaliya.
Madaxweynaha Somaliland oo u mahad cel iyay xildhibaan Gavin Williamson
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ayaa u mahadceliyay xildhibaan Gavin Williamson, oo ah xildhibaanka soo jeediyay in Baarlamaanka Ingiriisku ka doodo aqoonsiga Somaliland, isla markaana daadihinaya dooda.
Madaxweynaha ayaa qoraal uu soo dhigay bogiisa Twitterka, ugu mahadceliyay xildhiba an Williamson isagoo u rajeeyay in dowlada Ing iriisku dhagaysan doon to soo jeedintiisa.
"Gavin Williamson waad ku mahadsan tah ay daadihinta iyo in aad ku baaqday dood ku saabsan aqoonsiga Somaliland, waxan rajayn ayaa in dowladaadu ku dhagaysato adiga iyo xildhibaannada kale" ayuu yidhi madaxweyne Biixi.
Xildhibaan Williamson, ayaa daadihinaya dood lagaga doodi doono aqoonsiga Somalil and oo uu isagu keenay baarlamaanka Ingiri iska, taasi oo Shalay ka dhici doonta aqalka baarlamaanka ee Westminister.
Xisbiga Waddani oo u jawaabay Wasiir ka Arrimaha Dibadda Soomaaliya
Afhayeenka Xisbiga Waddani Barkhad Ja amac Batuun, oo ka jawaabay wadah adalka uu Wasiirka Arrimaha Dibbada Soomaaliya,
Arrimaha midnimada Somaliland iyo Soom aaliya kala yeeshay Wasiirka Arrimaha Afrika ee Ingiriiska, ayaa ugu usoo jeediyay in uu ka shaqeeyo nabadaynta Soomaaliya.
Batuun ayaa sheegay in Somaliland ay caalamka kula doodayso dim uquraadiya da ay gaadhay, doorashooyinka iyo dareenka ay shacabkeedu ka qabaan in ay aqoonsi hesho.
"Wasiirka Arrimaha Debadda Soomaaliya waxa aan leeyahay, Somaliland socotay, duni duna waxa ay ka doodaysa doorashooyinke edi mucjisada ahaa, dimuquraaddiyada ka ha na qaaday iyo dareenka dadkeedu ku rabaan ictiraaf ay caalamka ka helaan," ayuu yidhi Bat uun
"Adiga iyo Xukumaddaada uma taalo xas arad iyo xadgudub aad u geysaneysaan xuqu uqda Somaliland caalamka ku leedahay".
Batuun ayaa wasiirka usoo jeediyay in uu ka shaqeeyo nabadgalyada Muqdisho, "Waxa idinla gudboon inaad xasiloonida Xamar ka shaqeysaan oo aad ilaalisaan nafaha qaaliga ah ee shacabka sharafta leh ee aad cashuurt ooda huteellada ku cuntaan ee aan adeeg dawladdeed iyo Amni taam ah idinka hellin."
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali oo khadka telefoonka kula hadlay Wasiirka Arrimaha Afrika ee Ingiri iska Vicky Ford, ayaa kala hadlay arrimaha mi dnimada Somaliland iyo Soomaaliya, xili Shalay Baarlamaanka Ingiriisku yeelanayo do od ku saabsan aqoonsiga Somaliland.
Kadib kulan saacado badan qaatay oo Shalay ku dhexmaray Xerada Lamagalaay ee gudaha Magaalada Baledweyne Taliyaha ciid anka Lugta Jenaraal Maxamed Tahliil Biixi iyo xubno ka tirsan hoggaanka sare ee Golaha ka cdoonka Hiiraan ee uu hogaaminayo Jenaraal Abuukar Xuud, ayaa waxaa la sheegay in labada dhinac ay isku afgarteen heshiisyo hor dhac ah.
Taliyaha ciidanka dhulka dowladda Soom aaliya oo Dorraad gaaray magaalada Baledwe yne ayaa ku guuleystay in markii ugu horeysay ay wada kulmaan Jenaraal xuud iyo xubno ka tirsan Hirshabeelle oo dagaal ka dhaxeeyay, islamarkaana ay u suurta gashay inuu la galo Golaha Kacdoonka is afgarad hordhac ah.
Shaafici Maxamed Yuusuf oo ka mid ahaa xubnaha Golaha Kacdoonka Hiiraan ee qeybta ka ahaa kulanka Shalay ka dhacay Xerada La magalaay oo la hadlay warbaahinta ayaa she egay iney heshiis hordhac ah ay wada gaare en Golaha Kacdoonka iyo wafdiga ka socday dowladda dhexe ee uu hoggaaminaayay Jen araal Biixi. Inaga dowlad diid maheyn ee ma rwalba waxan sugeynay cid dowladda ka socota oo inagala hadashada tabashadeena Shalay waxaana isla afgaranay taliyaha Lugta ineysan dhicin xabad dambe oo wax walba heshiis iyo wadahal lagu dhameeyo" ayuu yiri Shaafici Maxamed. Injineer Khaliif Idiris oo ka mid ahaa xubnaha kulanka ka qeyb gal ay ayaa dhankiisa sheegay in taliyaha ciidan ka Lugta ay isla gaareen is afgarad hordhac ah, islamarkaana wax walba oo dhiman la dha meystiri doono.
"Waxaan cadeynaya anigo Khaliif Idiris ah inaan heshiis nabadeed oo is afgarad ah ka qaadanay dowladda Soomaaliya, waxii dhima na aan si nabad ah ku dhameyneyno Sooma ali sidaas ha ogaato" ayuu yiri Injineer Khaliif Idiris.
Majirto wax war ah oo kasoo baxay dhan ka dowladda Soomaaliya iyo maamulka Hir shabeelle oo ku aadan kulanka Shalay dhex maray wafdiga dowladda dhexe ee uu hoggaa minaayay Jenaraal Biixi ayna qeybta ka ahay een masuuliyiin ka tirsan maamulka Hirsha beelle.
UK oo mowqif kasoo saartay aqoonsi ga Somaliland kadib dooddii Shalay ee baarlamanka
Xukuumadda ra’iisul wasaare Boris John son ee dalka UK ayaa mowqif niyad-jab leh u soo dirtay Somaliland, xilli baarlamanka dalk aas Shalay la geeyey dood ku saabsan aqo onsiga Somaliland.
Wasiirka Britain ee Arrimaha Afrika Vicky Ford ayaa ku dhowaaqday in aqoonsi ay he sho Somaliland uu yahay mid ku xiran dow ladda federaalka Soomaaliya, oo ay tahay inay Somaliland ka wada-hadlaan.
"Doodda ka socota Aqalka Wa kiilada waxay ho osta ka xariiqeys aa mowqifka jogt ada ah ee UK ee ku wajahan maqa amka Somaliland. Waa arrin u taalla Somaliland iyo dowladda fe deraalka inay go’aan ka gaar aan mustaqbal kooda,” ayey Vicky Ford ku tiri qoraal ay soo dhigtay twitter-ka.
"Waxaan sii wadi doonaa in iskaashi kala sameyno dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland arrimaha dimqoraadiyadda, am maanka iyo barwaaqada.”
Hadalka Vicky Ford ayaa soo xiray dood dii Shalay qabsatay baraha bulshada iyo ra jadii Somaliland ee ay aheyd in doodda la gee yey baarlamanka UK ay hoggaamin karto aqo onsi ay hesho Hargeysa.
Warka kasoo baxay Vicky Ford ayaa yimid saacado kadib markii ay wada-hadallo la yeel atay wasiirka arrimaha dibedda Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali.
Wasaaradda Arrimaha Dibedda Soomaali ya ayaa qoraal ay soo saartay kadib kulank aas ku sheegtay "in labada wasiir ay ka wada-hadleen xoojinta iskaashiga ku dhisan wax wa da qabsiga, ixtiraamka midnimada iyo madax-baannaanida Qarannimo ee Labada Dal.”
"Labada Wasiir ayaa wada hadalkooda diiradda ku saaray kor u qaadidda xiriirka labo geesoodka ah ee Labada Dowladood iyo horumarinta iskaashiga dhinacyada siyaasad da, amniga, dhaqaalaha, horumarinta iyo arrim aha Gobolka Geeska Afrika, isaga oo Wasiir Cabdisaciid Muuse Cali uga mahad celiyey do wladda Ingiriiska taageerada ay u fidiso dowladda Somaliya,” ayaa lagu yiri qoraal ka.
Dooddan ayaa waxaa baarlama nka geeyey xildhibaan Gavin Williamson, oo horey u ahaa wasiirka difaaca UK, intii u dhaxeysay 2017 illaa 2019.
Tiro hoobiyaal ah oo Xalay lagu garaacay Beledweyne
Wararka ka imaanaya Gobolka Hiiraan ay aa shee gaya in tiro hoobiyaal ah Xalay lagu garaacay Mag aalada Beledweyne ee Gob alka Hiiraan.
Goobjoogayaal ayaa Warbaahinta u she egay in Ilaa 4 hoobiye ay ku dhacen Xaafada ha M/Beledwey ne.
Ilaa iyo haddda lama o ga khasaaraha ka dhashay hoobiyaasha Xalay lagu garaacay xaafadaha magaalada Beled weyne ee gobo lka Hiiraa.
M/Beledweyne ayaa waxaa Xalay ku su gan Taliyaha Ci idamada Dhulka Gen, Biixi iyo saraakiil ka tirsan milta riga Soomaaliya
Maxkamadda Ciidamada oo la horke enay Askar ku eedeysan dil & Dhac
Shalay oo Talaado ah ayaa waxaa Maxka madda Ciidamada Qalabka sida ee Soomaal iya qeybteeda 21aad ee degaannada Galmud ug la horkeenay Sagaal Askari oo katirsan Cii damada Hay’adda NISA, kuwaas oo ku eede eysan falal isugu jira dil iyo dhac.
Askartaan ayaa Xeer ilaalin ta Maxkamadda waxaa ay ku eedeysay inay dil iyo dhac dad Shacab ah ugu geysteen deg mada Matabaan oo ka tirsan Gobolka Hiiraan ,balse maamul ahaan hoostaga Dowlad Gobo leedka Galmudug.
Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida qeybta 21aad Gaashaanle Dhe xe Cabdullaahi Abuukar Xasan ayaa Askarta mid mid u weeydiiyay dambiyada dilka iyo dha ca ah ee lagu soo eedeeyay inay degmada Matabaan ka geysteen Bishii December sanad kii tegay ee 2021.
Xafiiska Xeer ilaalinta ayaa Booliska la wad aagay laba qof oo Shacab dhaawac ah iyo dhi mashada hal askari oo katirsan Booliska, wax aayna Maxkamaddda ka codsadeen in eede ysanayaasha lagu xukumo ciqaab u dhigantay dambiga ay galeen.
Baarihii kiskaan ayaa fadhiga Maxkamad da ka sheegay in Sagaalkaan Askari ay geys teen falalka dilka iyo dhaca ah oo ka dhacay meel xoogaa u jirta Koontoroolka degmada Matabaan oo lagu Magacaabo Shiine Qarxis, iyaga oo dhigtay Isbaaro ay dad Shacab ah uga qaateen 400 oo Dollar, kadibna ay Koont oroolka kusoo weerareen Booliskii joogay.
Bilihii la soo dhaafay ayaa degaannada Gal mudug waxaa laga soo sheegayay isku dha cyo Ciidamada dhexdooda ah iyo dil iyo dhac ay Ciidamada u geeysanayeen dadka Shacab
Sida ay noo xaqiijiyeen dad goobjoogay aal ah qof soo xirtay jaakadda qaraxda ayaa gab al-dhicii isku miidaamiyey Maqa ayad ku taalla afaafka hore ee xerada tababarrada ciidanka xoogga Soomaaliya ee Jeneraal Dhega-badan Ex xero Nac nac. Inta la xaqiijiyey 4-qof ay aa ku geeriyootay qa raxaas, sidoo kale u gu yara an 10 qof oo kale ayaa ku dhawacmay, dad kaas ayaa la sheegay inay isugu jiraan askar iyo shacab ku sugnaa maqaayada.
Afhayeenka Booliska Soomaaliya Cabdifit aax Aadan Xasan ayaa qoraal uu ka soo saa ray qaraxaas waxuu ku yiri, "Abaaro 5:18 PM qof naftii halige ah ayaa isku qarxiyey Maqaa yad u dhaw Xerada Jenera Dhagabadan Ex. Na cnac, khasaaraha ayaa noqday 14 qof oo dhaawac ah, ayadoo ay dhaawici u geeriyo odeen 4-qof, shakhsiga naftiisa haligaha ah ay aa toos u beegsaday Maqaayad ay ku shaa hayeen dad ka mid ab bulshada deegaan kaas.”
Kooxda Al-Shabaab ayaa durbadiiba she egatay masuuliyadda qaraxaas, warbaahinta taageerta kooxda ayaa werisay in Al-Shabaab ay sheegteen in qaraxaas lagu dilay 20 askari oo ka tirsanaa ilaalada dugsiga tababarrada cii danka Soomaaliya ee TurkiSom.
Maqaayada uu Shalay qaraxaasi ka dhac ay oo ku taalla ka soo horjeedka Warshadii ho re ee Nacnaca, haatana ah xero tababar oo ci idanka xooggu uu leeyahay ayaa dhacda dhinaca koonfureed ee degmada Wadajir, 15-Juun 2021-kii ayuu sidaan oo kale qarax ismii daamin ah uga dhacay maqaaxidaas.
Dhanka kale qarax gaari lagu dhejiyey ay aa mar kale Xalay ka dhacay isla degmada Wadajir, gaar ahaan agagaarka halka loo yaq aano Xaaji Gaabow, gaariga qaraxaas lagu dhejiyey waxaa lahaa shirkad lagu magacaabo Caadil, mana jiraan wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay, markii laga reebo burbur xoog leh oo gaaray gaariga, sidaas waxaa war baa hinta u xaqiijiyey afhayeenka bo oliska Sooma aliya G/le Cabdifitaax Aadan.
Al-Shabaab Oo Sheegtay Mas’uuliy adda Qaraxii Ka Dhacay Muqdisho
Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa she egtay mas’uuliyadda Qarax khasaaro badan dhaliyay oo ka dhacay Muqdisho, kaasi oo la gu beegsaday Magaayad ku taalla kasoo hor jeedka Xero Nacnac ee Dagmada Wadajir ee Gobolkani Banaadir.
Qoraal lagu baahiyay Baraha Internet-ka ee ku hadla afka Al-Shabaab ayaa lagu shee gay in Qaraxaasi ay ka dambeeyeen, ayna khasaaro ku gaarsiiyeen Ciidamada Soomaa lida ah ee Turkigu tababaray, waa sida ay ha dalka u dhigeene.
Qaraxa ka dhacay Muqdisho ayaa ahaa mid khasaaro badan dhaliyay waxaana la xa qiijiyay in 4 Qof ay dhinteen, halka ku dhawa ad 10 kalana wey ku dhaawacmeen kadib Mar kii Qof Xiran Jaakadda Qaraxa uu isku dhex qarxiyay dad ku Shaahayay Maqaayad ku taalla kasoo horjeedka Xero Nacnac Da gm ada Wadajir ee Muqdisho Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliland oo gaaray Adis Ababa.
Madaxweyna Somaliland, Muuse Biixi Cab di iyo wefdi uu hoggaaminayey oo Shalay ka ambabaxay magaalada Harge ysa, ayaa gaa ray caasimadda Addis Ababa ee dalka Ethi opia. Wafdiga Madaxweynaha ayaa waxaa gar oonka caalamiga ah ee Bole international Air port kusoo dhaweeyey saraakiil sarsare oo ka socota dawladda Ethiopia, kuwaas oo ay ka mid yihiin wasiirka maaliyadda dawladda Federal-ka.
Ethiopa, Axmed Shide iyo wasii rudawlaha ar rima ha siyaasadda ee wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia, Mr. Redwan Hussein.
Muuse Biixi Cabdi iyo wefdigiisa oo marti-qaad rasmi ah ka helay ra’isal wasaaraha dal ka Ethiopia, Mr. Abiy Ahmed.
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi iyo xubnaha weftiga ah ee uu hoggaaminayo, ayaa kulamo kala duwan la qaadan doona sa raakiisha ugu sarraysa ee D/Ithiopia muddada ay ku sugan yihiin caasimadda Add is Ababa.
Dowladda Soomaaliya oo war kasoo saar tay Qarax Ismiidaamin ah oo Muqd isho ka dhacay
Wasiirka Gaashaandhigga JFS ayaa cam baareeyey qarax Shalay lala eegtay meel u dhow Xerada Ciidanka Nacnac oo ay ku dhint een dad Shacab ah.
War kasoo baxay Wasiirka ayaa lagu shee gay in dowladda Soomaaliya ay ka xun tahay weerarkaasi ayna qaadi doonto tilaabooyin la gu xaqiijinaayo ammaanka.
Warka Wasiirka ayaa siddaan u qornaa
"Waxaan cambaareynayaa falka wushuushnim adda ah ee argag ixsada ay ku dhibaateeyeen sha cab aan wa xba Shalaysan oo ku sugnaa go ob maqaayad ah.
Waxaan Allah (SW) uga bar yayaa in uu Janada ka waraabIyo intii ku sha hiidday, caafim aad deg-deg ah na siiyo intii ku dhaawacantay.
Dowlad iyo shacab, waxaa lagama maarm aan ah inaan u istaagno sidii aan isaga qaban laheyn cadowgaan arxanka daran”
4 Qof ayaa dhimatay ku dhawaad 10 kalana wey ku dhaawacmeen kadib Markii Qof Xiran Jaakadda Qaraxa uu isku dhex qarxiyay dad ku Shaahayay Maqaayad ku taalla kasoo hor jeedka Xero Nacnac Da gmada Wadajir ee Mu qdisho Muqdisho.
Dadka dhintay iyo ku dhaawacmay ayaa loola cararay isbitaallada Muqdisho waxayna u badnaayeen dhalinyaro
Dad Lagu Qafaashey Macbad Yuhuud du Ay Leedahay Oo La Sii Daayey
Wadaad macbad ku yaalla magaalada Tax es ee dalka Mareykanka oo sabtidii la qafaa shey, ayaa ka hadley sida uu kursi ugu tuurey nin hubeysan oo qafaa shey, si uu uga baxsa do.
Isaga iyo laba kale oo la qafaashay, ayey duruufta u saamaxdey iney kasoo baxsad aan kuwii afduubka ku hey stay, iyadoo aan xabad dhicin, kadib markii hal kaasi ay ku jireen toban saacadood.
Afduubaha, ayaa waxaa lagu magacaabi ji rey Malik Faisal Akram, oo heysta dhal ashada dalka Ingiriiska, iyadoo la toogtey kadib markii uu iska hor imaad dhex mareen booliiska.
Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden, ayaa ku tilmaamey dhacdadani afduubka mid fal argagaxiso ah.
Baadari Charlie Cytron,-Walker, ayaa u sheegay BBC-da warbaahinta ay bah wadaag ta yihiin ee CBS, in kooxdoodu ay tukanayeen markii ay maqleen jug weyn, taasoo markii danbe isu badashey afduub hubeysan.
Baadariga ayaa intaa ku darey in xiligii la heystay intiisa badan looggu hanjabayey in waxyeello xun loo geysan doonno.
Mid kamid ah la heystayaasha ayaa lasii day ey lix saacadood kadib, halka saddexda kala na ay baxsadeen dhowr saacadood kadib.
DF Somalia oo si kulul u cambaareysay weeraradii ABU DHABI
Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya, Mudane Cabdisac iid Muuse Cali oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa ka hadlay weeraradii
xooganaa ee ka dhacay magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka.
"Waxaan si adag u cambaareynayaa weerarka argagaxiso ee lagu qaaday magaalada Abu Dhabi,” ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay tac si u dirayaan qoysaska ay dadkooda ku dhin teen weeraradaas, kuwa dhaawaca ahna ay u rajeynayaan caafimaad deg-deg ah.
"Waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa dad kii ku dhintay iyo qoysaskooda,” ayuu sii raaciy ey wasiir Cabdisaciid.
Weeraradan ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac, waxaana ku geeriyooday illaa sad dex qof, halka lix kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen saraakiisha Booliiska.
Dadka dhintay sidoo kale laba ka mid ah waxa ay u dhasheen dalka India, halka qof kal ena uu ka soo jeedo waddanka Pakistan.
MUCJISO: WAA TEE MAGAALADA SOMAALIYEED EE SIXIRKA LAGA QUR'AAN SAARAYO?
Maamulka magaalada Harta-Sheekh ee de egaanka Soomaalida ayaa sheegay inuu dhi baato ba'an uu ku hayo dab magaaladassi si joogta ah uga kacaya ayna garaneyn waxa kici naya.Xigashada Sawirka,Facebook
Qoraalka sawirka, Harta-Sheekh
Toddobaadkan gudahii waxaa la sheegay aa inuu magaaladaasi Ganacsiga xuddunta u ah 3 jeer uu dab ka kacay dhibaatana uu gaa rsiiyey qoysas danyar ah.
Duqa Magaalada Hartashiikha Mukhtaar Xasan Aadan oo BBC u warramay ayaa sheeg ay in ka dib markii baaritaanka ay ku sameeye en ay u soo baxday arrinta iney ka weyn tahay wax bani aadam uu sameeyo oo wax kale ay meesha ku jiraan.
"Gubashada imika muddo isbuuc ah ayay nagu bilaabantay waxaana markii hore gubtay laba guri inagoo u arkeeynay gubashadii iska caadiga ahayd, hadana habeenkii uu jimacaha soo galayay ayuu dabka caadi u bilowday ilaa hadana wuu socdaa."
"Maalintii ugu yaraan 3 guri ayaa gubanaya Shalay ugu dambeysay laba guri ayaanu dami nay, markii saddexaadna waxaam baqtiinay ca leen oloshay ilaa haatanna gubashada waxay mareysaa 12 guri toddobaadkan gudihii oo keliya," ayuu yiri Mukhtaar Xasan Aadan.
MAXAY TAHAY SABABTA AY GURYAHA U GUBANAYAAN?
Joodari gubtay Duqa magaalada ayaa sheegay in ka dib markii ay baaritaano same eyeen ayaa waxay ogaadeen in dabka sabata dhabta ah aysan garanayn balse ay u maleey een inuu sixir yahay.
Waxa uu sheegay in dadka guryahaasi gub tay ku suganaa ay u sheegeen in dabka marka hore la arkaya uun iyadoo barkimaha iyo fira ashyada oo gubanaya.
"Dadka waxay kuu sheegayaan inay arkaya an uun barkimaha, firaashyada iyo shandaha oo ololayaa iyada oo aan guriga yaalin wax dab, leerkana dansan yahay."
"Arrimahaa markaan u sii kuurgalnay oo aan baaritaano dheeraad ah sameynayay ay aa waxaa dhacday in mar noogula yeeray ina an argano furaash gubanayaa ayaan waxaan aragnay cawdii na garab taalay ay oloshay."
Dhacdooyinka aadka inooga yaabiyay waxaa ka mid ah inaan aragnay guri uu siddeed jeer dab ka kacay, markii dadkii deganaa iyo qar aabadii ay yaabeen ayaa gabadhii deganayd guriga kooma gashay ka dibna abtigeed ayaa meel mii ah u qaaday.
Duqa magaalada ayaa sheegay in dhacdo tan la mid ah ay la kulmeen sannadkii hore xill igaan oo kale waxaana ku darnay ballaayooyi nkan wareegaya ee musiibooyinka ah.
"Dhacdaan shir baanu galnay oo ka mid yihiin culimada iyo odayaasha deegaanka waxaana inoo soo baxday in arrintan Qur'aan lagu eego oo magaalada lagu akhriyo inkastoo weli ay dadkii u istaagin, laakin inagu waxaan dhaafin weynay in waxaani ay sixir yihiin oo magaalaa lagu xiray maaddaamaa sannadkii hore xilligaan oo kalena dabka noocaan ah jiray."
Waaxda dab damiska oo ku hawlan daminta dabka Duqa Magaalada Hartashiikha Mukhtaar Xasan Aadan ayaa BBC-da u sheeg ay in haatan dabkii la baqtiiyay oo ay u istaag een shaqaalaha waxaada dabdemiska, 24-ka saacadoodna heegan baan nahay inaga aya ana xakameyna dabka,hantidana bad'baadina
Waxa uu sheegay in haatan ay ku hawlan yihiin sidii culimada Soomaalida ay u kaashan lahaayeen meel-kasta oo ay joogaan gaar ah aan kuwa xagga sixirka taqasuska u leh oo aan numbaradoda u heli lahaa ka dibna aan magaalada ugu yeerno si ay inoogu caawiy aan cilmigaas ay aqoonta u leeyihiin.
"Magaalada hadda Qur'aanka waa la saaray, waxaana tahaliil loo qeybiyay magaalada. Si doo kale misaajiaddada ayaa laga iclaamiyay in guryaha Qur'aan lagu akhriyo oo sameeca daha kor loo qaado."
"Sidoo kale Arday xaafidul Qur'aaniin ah ayaa la isu keenay oo akhrisay ka dibna tahal iishii ay tufeen ayaa dadka loo qeeybiyay." Ay uu yiri Sheekh Ismaaciil Axmed oo ka mid ah culimada magaalada."
Sheekha ayaa sheegay in sixirka, jinka iyo wixi la halmaala Qur'aanka lagu daaweeyo wa xaa inoo sheegay Rasuulka Ilaahay NNKH, qa asatan waxa uu inoo sheegay in guriga lagu akhriya suuratul baqara uu jin waxba ka qaadi karayn amaba aanu soo geli karinba marka da dkuna aad ayaan u sheegnay oo waxaan ku wacyi gelinay inay guryaha ku akhriyaan Qur'a anka gaar ahaana suuratul Baqara.
"Misaajiddada ayaan sidoo kale ka bilow nay qanuud iyo duco si aan aan musiibadan u ga badbaadno sababtoo kolka ay musiibo dha cdo dhanka Alle ayaa loo cararaa."
Dhanka kale waxay BBC-du la hadashay Jaamaca Xuseen Nuux oo ka mid odayaasha deegaanka, gurigiisana uu siddeed goor gub tay.
"Maalin khamiis ah oo ahayd abaare 9-kii ar oornimo ayuu gurigayga ka kacay dabkii ugu horreeyay wixii dhaxyaallay-na waa ay wada gubteen ka dibna guri yar oo kale ayaanu ku guurnay." Jaamac ayaa sheegay in markaasi ka dib ay dheceen dhammaan dhacdooyinka kale oo uu bilaabanayay marka uu dhismaha bilaabo. Jaamac ayaa sheegay in wax keliya ay u maleeyeen in waxaani ay yihiin sixir ama jin uun. Waxaa uu sheegay in markii ay baar een ka dib ay u soo baxday in qof bini'aadan ah uusan bilaabin dabkan
Puntland Oo Shaacisay Xilliga La Qaban Do ono Dorashada Guddomiyeyasha 3 Degmo
Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaal ka iyo Dimuqraadiyeynta maamulka Puntland ayaa ku amartay Guddoomiyaasha Gobolada Nugaal, Bari iyo Karkaar iyo dhammaan Xubnihii 25kii October 2021 loo doortay Gole yaasha Deegaanka ee Degmooyinka Ufeyn, Qardho iyo Eyl in Wasaaraddu u asteysay far iisinta Goleyaasha 3da Degmo iyo qabashada doorashada Guddoomiyaasha Degmooyinka 27 January 2022, saacaddu markay tahay 8: 00am ama labo saac oo subaxnimo.
Wasaaraddu waxay ku wargelinaysay dha mmaan inta fariintaani ku socoto in si waafaq san sharuucda Puntland Wasaarad du fududeyn doonto:1. In fadhigaas lagu dhaariyo Xubnaha Goleyaa sha Deegaanka ee la doortay sida ku cad *Qodobka 22aad ee Sharc iga Lambar 7.*
2. In isla fadhigaas Gole kasta iska dhex doorto Guddoomiye iyo Guddoomi ye kuxigeen iyadoo la raacayo habraaca doora shada Goleyaasha Deegaanka Puntland ee ku xusan *Qod. 29aad ee Sharciga Lambar 7.*
3. Markii doorashadu dhacdo waxaa mar kale la dhaarinayaa Guddoomiyaha iyo Kuxige enka la doortay.
4. Fadhiyada Goleyaashu waxay ka kala dhacayaan: a) Hoolka Beeyada ee Qardho; b) Hoolka Dowladda Hoose ee Ufeyn; b) iyo Hoo lka Dowladda Hoose ee Eyl. FG. Wasaaradda ayaa idin la soo wadaagaysa haddii goobta la gu qabanayo fadhiga Goleyaasha wax iska badalaan
Ciidanka Booliska Oo Xalay Howlgalo Ka Sameeyay Degmooyin Ka Tirsan G/Banaadir
Ciidanka Booliska dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa habeenimadii xalay aheyd howlgalo saacado qaatay waxaa ay ka sam eeyeen degmooyinka Waaberi, Hodan, howl wadaag, Warta-nabadda iyo Heliwaa ee Gob olkaan Banaadir.
Ciidamada Booliska ayaa howlgalada into da badan ka sameeyay waddooyinka laamiga, iyagoona baaritaano kala duwan ku sameeyn ayey gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee ist cmaalayay wadada, sidoo kalena su’aalo la xiriira amniga weydiinayey shacabka.
Howlgalada oo uu hoggaaminayey Taliyaha Ciidanka Booliska Gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud Qaroole ayaa waxaa ujeedkiisa lagu sheegay inuu ahaa mid lagu doonayo in la gu xaqiijiyo amniga Muqdisho oo maalma han u muuqda mid faraha kasii baxaya.
Saraakiisha Booliska ayaa intaas kusii daray in howlgalada lagu sugayo amniga Ca asimadda ay sii socon doonaan, si looga hor tego falalka amni darro ee isugu jira qaraxy ada iyo dilalka qorsheysan ee xiliyada qaarko od ka dhaca Muqdisho.
Howlgalada ay fuliyeen Ciidanka ayaa ku soo aaday, iyada oo maalmihii dambe Muqd isho ka dhacayeen qaraxyo Is-miidaamin ah oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac, waxaana qaraxii ugu dambeeyay ee uu fuliyey qof is-miidaamiye uu shalay ka kala dhacay degmada Wadajir iyo dharkeynleey, kuwaasi oo ay ku dhinteen dad dhowr ah oo isugu jiray Askar iyo dadweyneba walina aan si sax ah loo xaqiijin Karin